Manaiky an’i Kristy
"Na iza na iza manaiky fa Zanak'Andriamanitra Jesôsy , dia mitoetra ao aminy Andriamanitra, ary izy kosa ao amin'Andriamanitra." 1 Jao. 4:15
Ny fanekena izay resahin’i Jaona eto dia tsy vokatry ny anaram-pinoana, fa vokatry ny finoana mitoetra ao amin’ilay Mpamonjy velona, vokatry ny finoana fa ny fitahiam-pamonjena dia natao ho eo an-tanantsika, tamin’ny alalan’ny fijaliana sy ny fahafatcsan’i Kristy, izay nitsangana tamin’ny maty ary velona hanao fanelanelanana ho antsika. Tokony hahazo antoka isika hoe Mpamonjy antsika i Jesôsy, ary tsy hahafinaritra izany fiainana izany, na hanome antsika fiadanana na fanantenana, raha tsy nitia antsika Izy ary nanolotra ny tenany ho antsika. - YI, 6 Janoary 1898.
Tsy misy diso ny filazantsika ny fahamarinan’i Kristy, raha toa ka vitantsika ny manaraka ny fepetra takina amin’izany fampanantenana izany. Efa narotsak’Andriamanitra tamintsika tao anatin’ny fanomezana iray lehibe ny lanitra iray manontolo, ary antsika avokoa izay rehetra hita ao anatin’izany fanomezana izany, raha toa ka manaiky an’i Kristy ho Mpamonjy ny tenantsika manokana isika (…) Miresaha momba an’i Jesôsy; zaro hiteny momba ny famindrampony ny lela, hiresaka momba ny heriny, haneho ny fiderana Azy, izay niantso anao avy tamin’ny haizina ho amin’ny fahazavany mahagaga. - YI, 12 Jolay 1894.
.tanora kristianina, mijery anao avokoa izao tontolo izao, ny anjely, ary ny olombelona. Aoka ianao hahery fo ao amin’Andriamanitra. Sikino avokoa ny fiadian’Andriamanitra iray manontolo, ary aoka ho hitan’ny tsy mpino hoe tsy misy pentina ny fiainanao satria mijoro ho mpankatô sy mahitsy amin’ny didin’Andriamanitra rehetra ianao. Vitanao ary asain’Andriamanitra hataonao ny manapa-kevitra hijoro ho vavolombelona ho Azy. - YI, 12 Jolay 1894.
Ry tanora kristianina, mijery anao avokoa izao tontolo izao, ny anjely, ary ny olombelona. Aoka ianao hahery fo ao amin’Andriamanitra. Sikino avokoa ny fiadian’Andriamanitra iray manontolo, ary aoka ho hitan’ny tsy mpino hoe tsy misy pentina ny fiainanao satria mijoro ho mpankatô sy mahitsy amin’ny didin’Andriamanitra rehetra ianao. Vitanao ary asain’Andriamanitra hataonao ny manapa-kevitra hijoro ho vavolombelona ho Azy. - YI, 12 Jolay 1894.
Mila mitoetra ao amin’ny teny fampaherezana nomen’i Kristy ho an’ny mpianany teo amin’ny fotoana efa hifaranan’ny asany tetÿ an-tany isika (...) Na dia fahafatesana mahatsiravina aza no nanoloana Azy, dia teny feno fampanantenana no nomen’i Kristy ny mpanaraka Azy. Niriny ny hitondra izay teny fampaherezana rehetra azony natao, ho ao am-pon’izy ireo. Aoka isika hahery ao Aminy. - L, t. 24,1912.